ပရိသတ်တွေ ကို ပြန်လည် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ပေးတော့မယ့် ဘွန်ဒက်လီဂါ - SPORTS MYANMAR
လက်ရှိ ကပ်ရောဂါ အကျပ်အတည်းထဲမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းကောင်း နဲ့ တွန်းလှန်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဂျာမဏီ လို့ မှတ်ချက်ပေးရတော့မှာပါ။
ဘောလုံးပွဲတွေ ပြန်လည် စတင်တုန်းကလဲ သူတို့ရဲ့ ဘွန်ဒက်လီဂါ ပြိုင်ပွဲကပဲ အစောဆုံး စတင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ အင်္ဂလန် ၊ စပိန် ၊ အီတလီ တို့တောင် ဂျာမဏီ နဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း တစ်ချို့ ကို မှီငြမ်းကို လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမန်တွေက အဲဒီလောက်အထိ ရှေ့ပြေးတဲ့ လူမျိုးတွေပါ။
အခုလဲ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေကို ဘွန်ဒက်လီဂါ ပြိုင်ပွဲ စတင်တော့မယ့် အချိန် ကတည်းက ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အတည်ပြု သွားခဲ့ပြန်ပါပြီ။
မနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျာမဏီ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ ထိပ်သီးဘောလုံး လိဂ်3ခု အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့အပြီးမှာ ၊ ကွင်းဝင်ဆံ့မှု ရဲ့ 20% အထိ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့်ပေးဖို့ သဘောတူညီချက် ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်တန်း အသင်းလေးတွေ ကတော့ ကွင်းဝင်ကြေး ကို ဦးစားပေးပြီး ရပ်တည်ရတာကြောင့် ၊ 20% ပမာဏထက် ပိုတဲ့ အရေအတွက်မျိုးအထိ ခွင့်ပြုပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘွန်ဒက်လီဂါ အဖွင့်ပွဲစဉ်ကို သောကြာနေ့ ညမှာ လက်ရှိ ချန်ပီယံ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် နဲ့ ရှော်ကေး အသင်းတို့ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမှာပါ။
ဘွန်ဒက်လီဂါ အသင်းတွေ ဟာ အခုလို ပရိသတ်တွေ ပြန်လည် ကြည့်ရှုခွင့် ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အဓိက စည်းကမ်းချက်ကြီး4ခုကို လိုက်နာရမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ၊ ခံဝန် ကတိတော့ ပေးထားရပါတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေကတော့
1. အရက် ၊ ဘီယာ ရောင်းချမှု လုံး၀ ပြုလုပ်ရခြင်း မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လာရောက် ကြည့်ရှုကြမယ့် သူတွေဟာ အရက်မူးနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာရင် ၊ စည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက်နာမှာ မဟုတ်ပဲ ၊ အခြား သူတွေကိုပါ အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် အခုလို သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. အဝေးကွင်း ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုခွင့် ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ အချက်ကတော့ ဘောလုံးဖန်တွေ အကြား ခရီးသွားလာမှုတွေ မြင့်တက်လာခြင်း မရှိအောင် ထိန်းချုပ်တာမျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အကြားမှာလဲ လူစု လူဝေးဖြစ်ခြင်း ကနေ တားဆီးနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်လည် ရှင်းလင်းထားပါတယ်။
3. မတ်တပ်ရပ် ကြည့်ရှုရတဲ့ လက်မှတ်တွေ ရောင်းချခွင့် မရှိ။ ဥရောပ က ဘောလုံးကွင်းတွေမှာ ဈေးပေါပေါ နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အတွက် ရောင်းချတဲ့ လက်မှတ်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ လက်မှတ်တွေဟာ ထိုင်ကြည့်လို့ ရနေတဲ့ နေရာမျိုး မဟုတ်ပဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကြည့်ရတာပါ။ အကယ်၍ အဲဒီလက်မှတ်မျိုးတွေသာ ရောင်းချခဲ့မယ် ဆိုရင် Social distancing အတွက် ရှုပ်ထွေးလာနိုင်တာကြောင့် ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
4. နောက်ဆုံး တစ်ခုကိုတော့ Personalized Tickets လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားပါတယ်။ သဘော က ကိုယ့်လက်မှတ် ကို အခြား မည်သူ့ တစ်ဦးတစ်ယောက် ကိုမျှ တစ်ဆင့်ခံ ရောင်းချခွင့် မရှိလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ ဒါမှလဲ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းထားတဲ့ အချိန် နဲ့ အကြောင်း တစ်စုံ တစ်ရာ ပေါ်လာခဲ့လို့ ပြန်ပြီး နောက်ကြောင်း လိုက်မယ် ဆိုရင်လဲ အလွယ်တကူ ဖြစ်အောင်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြွင်းချက် အနေနဲ့တော့ ဗိုင်းရပ် ကိစ္စက ရုတ်တရက် အခြေအနေ ဆိုးဝါးလာခဲ့ရင် ၊ အချိန်မရွေး ပြန်လည် ပိတ်ခွင့် ရှိနေတယ်လို့ နှစ်ဖက် စလုံးက သဘောတူထားပါတယ်။
ဂျာမဏီ ဟာ သူတို့ ရဲ့ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ ကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုခွင့် ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အင်္ဂလန် ကတော့ ဂျာမဏီလို လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေဆဲပါ။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ အချိန်ထိ မြင့်တက်နေသေးတဲ့ ကူးစက်သူ ဦးရေ နဲ့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဦးရေ ကလဲ ဂျာမဏီထက် အဆ 40 ပို များခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေက နည်းပါးလွန်းနေဆဲလို့ သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။